Dalladaha Waxbarashada oo mar labaad la amray | KEYDMEDIA ONLINE
Dalladaha Waxbarashada oo mar labaad la amray
Dowladda Fadraalka Soomaaliya ayaa amartay in dalladaha waxbarashada, Iskuullada iyo Jaamacadaha ay u hoggaamsamaan amarka ka soo baxay Xukmuumadda ee waxbarashada hakadka lagu galiyay muddada labada totobaadd ah.
MUQDISHO, Soomaaliya – Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee XFS ayaa lagu baritaaray amarkii Xukuumadda ee ahaa in la xiro goobaha Waxbarashada, waxayna sheegeen in waxbaridda la sii wadi karo ayadoo laga faaiideysanayo tignoolajiyadda casriga ah.
“Wasaaraddu waxay fareysaa dalladaha Waxbarashada, maamuleyaasha Iskuullada iyo Guddoomiyeyaasha Jaamacadaha inay u hoggaamsamaan amarka xiridda goobaha Waxbarashada muddo labo todobaad ah oo ka bilaabaneysa 3-da Maarso 2021” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Wasaaradda Waxbarashada.
Arbacii oo ahayd maalinti uu dhaqan galayay amarka DF ayay guud ahaan Iskuulada gaarka loo leeyay shaqeynayeen, qeyb ka mid ah ayaana ardayda ku amray in ay dib u soo laabtaan Sabtiga oo jadwalka Waxbarasho uusan waxba iska baddali doonin.
Saacado ka hor ayay ahayd, markii Daladda waxbarshada ee FPENS ay Dowladda ka dalbatay in dib u eegis lagu sameeyo go’aankii Xukuumadda xil-gaarsiinta ka soo baxay 2-dii bishaan ee lagu xiray goobaha Waxbarashada.
FPENS, ayaa Dowladda xasuusisay xaaladdii ay sanadkii hore la kulmeen ardayda Soomaaliyeed, taas oo salka ku heysay, fasixii uu sababay cudurka COVID-19. waxayna ku talisay in Iskuullada loo ogolaado in sii shaqeeyaan.
Goobaha Waxbarashada ayaa ka mid ah goobaha uu ka dhaco isku imaadka ugu badan, 2-dii bishaan ayayna DF, xiraty muddo labo todobaad ah, kadib laba kacleyyna COVID-19.